Sida loo doorto dallaal ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Sida loo doorto dallaal ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Mid ka mid ah go'aamada ugu muhiimsan ee aad u sameyn doonto sidii ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa ah, dabcan, in la ogaado dallaalka uu dooranayo inuu bilaabo ganacsiga.
Xulashada saxda ah ee dallaal internetka ah ayaa muhiim u ah guusha xirfaddaada ganacsi. Waxaad ubaahantahay dookh ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh oo sumcad wanaagsan leh. Dilaalkaagu waa inuu u heellan yahay bixinta adeegyo tayo leh macaamiishiisa.
Maanta, waxaa jira dalal badan oo ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah oo halkaa ka raadinaya macaamiil cusub. Ganacsade doonaya inuu ka ganacsado ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa inuu taxaddar ku muujiyaa dallaalka. Muuqaal deg deg ah oo ku saabsan goleyaasha internetka ee kala duwan iyo websaydhadu waxay bixiyaan dib u eegis isku dhafan iyo fikrado kuwaas oo kaliya ku daraya jahwareerka. Marka, sidee ganacsade u doortaa dallaal ikhtiyaari ikhtiyaari ah? Waxaad ku ogaan doontaa maqaalkan.
Waxyaabaha soo socdaa waa qodobbada muhiimka ah ee ay tahay inaad iska ilaaliso markaad dooranayso dallaal ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh:
1. Hantida Loo Heli Karo Ganacsi
Dhammaan dallaaliintu waxay bixiyaan noocyo kala duwan oo hanti la iibsan karo ah. Waa inaad hubisaa in dallaalka la doortay uu leeyahay hantida aad rabto inaad ka ganacsato. Waxaad ka eegi kartaa "Tusmada Kheyraadka" ee bogga dallaalka aad dooratay si aad u hesho macluumaadkan.
2. Lacagta ugu yar ee dhigaalka
Qodob kale oo tixgelin la siiyaa waa xaddiga dhigaalka ugu yar. Haddii aadan haysan raasamaal aad u tiro badan oo aad ku ganacsatid, waxay noqon laheyd caqabad aad u adag inaad ku guuleysato ganacsiga ikhtiyaariga ah . Warka fiicani waxa weeye inay jiraan dulaaliin qaata aqbalaadda deebaajiga hooseeya iyo qiimaha aan qiimaha lahayn. Ganacsiyada casriga ahi waxay jebinayaan isbeddelka shirkad la aasaasay oo ganacsi ku jirtay sannado sidaas awgeedna ay aqbasho dalabyada kaliya ee ah 1000 $ iyo wixii ka sarreeya. Maanta, waxaa jira qaar ka mid ah dallaaliinta haysta dhigaalka ugu yar ee $ 10, halka heerka ugu hooseeya ee dallaaliintan uu yahay $ 1 oo keliya.
Sidaa darteed, haddii aadan haysan lacag muhiim u ah maalgashi, waxaa lagugula talinayaa inaad la shaqeysid dallaal kuu oggolaanaya inaad sameysato koonto ganacsi oo yar.
3. Tirada sannadaha waxqabadka
Caqli ahaan, mudada dheer ee dallaal ikhtiyaari ikhtiyaari ah uu jiray, ayay u yar tahay inay marin habaabiso macaamiisheeda.
Had iyo jeer hubi marka ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah la aasaasay si aad u ogaato inta ay ganacsi ku jirtay. Loogu talagalay ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo cusub, way fududahay in lagu baabi'iyo lacagaha ganacsatada markasta ama sababa dhibaatooyin ka noqosho marka loo eego dillaal horeyba u aasaasay.
4. Taageerada Macaamiisha
Urur kastaa wuxuu waxtar u leeyahay sida taageerada loo fidiyo macaamiisheeda. Tani waxay sidoo kale khuseysaa wakiillada dallaalnimada xulashooyinka binary. Adeegga macaamiisha ayaa muhiim ah! Markaad dooranayso dillaal internetka ah, dooro mid leh jawaabo, xirfadle, iyo khibrad wakiillo taageero macaamiisha ah.
Hubi haddii dallaalku ku siinayo taageero luqadda aad doorbideyso. Tayada adeegga macaamiisha guud ahaan waxay muujineysaa in dallaalnimadu ay qadarinayso macaamiisheeda. Haddii aad soo dirto emayl ama aad kula xiriirtid wada-hadal toos ah, sidee dhibaatada si xirfad leh loola dhaqmaa?
5. Shuruudaha iyo shuruudaha
Xaaladaha isticmaalka, in kasta oo ay dheer yihiin oo dhib badan yihiin, waa meel fiican oo lagu helo dhammaan faahfaahinta ka hor intaadan dooran xulashada dallaalkaaga ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah . Hawl wadeenadu waa inay akhriyaan shuruudaha guud maadaama ay yihiin dukumiinti sharci ah. Fiiro gaar ah u yeelo qeybaha ku saabsan dhigista iyo ka-noqoshada lacagaha; raadso xayiraad ama khidmad laga yaabo in lagaa qaado, iwm. Waxaad la yaabi doontaa inaad ogaato in ganacsatada badan ee dareema khiyaano, aysan u fiirsan shuruudaha iyo xaaladaha. Mar labaad, waxaa haboon inaad waqti kubixiso akhrinta boggaga internetka ee ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah halkii aad dhigi lahayd lacagaha oo aad dhibaato kala kulanto bixitaanka.
Daacadnimadu sidoo kale waa qodob kale oo muhiim ah in la tixgeliyo ka hor inta aan la dooran dallaal. Qeybta faa'iidada leh ee ikhtiyaaraadka ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa ka buuxa khiyaanooyinka isku dayaya inay la cararaan caasimada maalgashadayaasha aan waxba galabsan. Si kastaba ha noqotee, dhowr maamuleyaal maaliyadeed oo adduunka ah ayaa ka shaqeynaya sidii loo xoojin lahaa daahfurnaanta qaybta.
Xulashada ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee aad rabto inaad doorato waa inuu cadeeyay mid ka mid ah maamulayaasha si looga fogaado inaad lumiso lacagtaada adag ee lagu kasbaday khaa'imiinta internetka.
7. Madal Ganacsi
Doorashada shirkad dallaal ah oo leh saaxiibtinimo, la awoodi karo, iyo ganacsi fudud ayaa fure u ah in riyadaadu run noqoto sida dallaal ikhtiyaari ikhtiyaari ah . In warshadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah, dilaaliinta badankood waxay bixiyaan barnaamijyada shabakadaha; sida oo kale, looma baahna inaad soo dejiso softiweer oo aad ku rakibo kumbuyuutarkaaga kahor intaadan bilaabin ganacsiga.
Dullaaliinta kale waxay sidoo kale bixiyaan barnaamijyo aan shabakad ku saleysneyn. Iyadoo aan loo eegin nooca madal aad isticmaasho, hubi inay ku siineyso shuruudo ku filan si aad ugu faa iideysato ganacsiga ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah.
Sidoo kale, dilaaliinta badankood waxay hadda bixiyaan noocyo mobilada ah oo meheradooda ah. Hal-abuurnimadan, looma baahna in lagu dheganaado kumbuyuutarka si loo raadiyo fursado ganacsi oo habboon. Haddii aad dooratid dillaal internetka ah oo bixiya muuqaalkan, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ku rakibto codsi qalabkaaga moobiilka ah oo aad ku raaxaysato ganacsiga safarka markasta, meel kasta.
8. Faa’iidooyinka iyo soo celinta
Ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah wuxuu noqon karaa qaab maalgashi oo waxtar leh oo xitaa ka sii badnaan kara haddii aad hesho dillaal waxsoosaar sare leh iyo lacag bixinno badan. Waxsoosaarka guud ahaan wuxuu u dhexeeyaa 60% ilaa 80%. Xulashada dallaal leh soo laabasho sarreysa had iyo jeer ma noqon karto ikhtiyaarka saxda ah. Waxyaabo badan ayaa sameeya ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh , markaa hubi inaad doorato midka ugu habboon baahidaada.
9. Qalabka maaliyadeed
Xulashada dillaal ku siin kara qalab ballaadhan oo qoto dheer oo maaliyadeed si loo falanqeeyo suuqyada maaliyadeed iyo jawiga dhaqaale waa xulasho xigmad leh. Falanqaynta suuqa farsamada si loo helo moodello iyo xaalado waa hab aad waxtar badan u leh oo yareynta halista. Dullaaliinta ugu fiican waxay bixiyaan qalab sida keydka nool, badeecadaha, indices, iyo xogta lacagta. Qaar ka mid ah iyaga ayaa sidoo kale bixiya jadwal dhaqaale oo kaa caawin kara istaraatijiyadahaaga ganacsiga iyo qorsheynta howlahaaga si aad u weyneyso soo noqoshadaada.
Qaadashada waqti aad ku doorato dillaalka saxda ah waa tallaabo muhiim ah maxaa yeelay waxay leedahay waqti dheer in la yiraahdo haddii aad guuleysato ama lumiso inta aad ka ganacsanayso ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah. Waxaad ka hubin kartaa dib-u-eegista ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah ee internetka ka socda barta wax lagu qoro ee sumcadda leh iyo adeegsadayaasha si aad u ogaato waxa khabiirku ka sheegayo dillaalka gaarka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad weli u baahan tahay inaad taxaddar muujiso maxaa yeelay ma jiraan wax xaqiijin ah oo 100% ah in dillaaliintu kulmayo dhammaan shuruudaha kor ku xusan inay sharci yihiin. Waxaa jira kiisas badan oo shirkadaha si fiican u dhisan ay ku fashilmaan oo ay ula yimaadaan lacagta macaamiishooda. Si kastaba ha noqotee, adoo raacaya qawaaniinta kor ku xusan, ganacsade ayaa u muuqda inuu doorto dookh ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh .